Shiinaha Qalabka mashiinka aluminium ee mashiinka mashiinka aluminium qaybo ka mid ah warshadaha iyo soo saarayaasha. Weldo
Qalabka aluminium ee mashiinka aluminium ee saxda ah ee saxda ah
Aluminium waa bir khafiif ah, oo aan magnetic, bir ah oo midabkeedu lacag yahay oo loo samayn karo ku dhowaad qaab kasta. Waxaa loo rogi karaa saxamo qaro weyn oo loogu talagalay taangiyada gaashaaman ama waraaqo khafiif ah oo lagu duubo. Waxaa sidoo kale lagu jiidi karaa silig waxaana laga dhigi karaa daasado.
Qaybaha aluminium ee aluminium, qaybaha aluminium ee aluminium
Waxyaabaha badanaa la farsameeyo
Aluminium 5083, iwm
Zinc / nickel / dahaadhka chrome, galvanized kulul, rinjiyeyn,
dahaadhka budada, Anodize Oxidation, ama midabyo leh: sida qalin, buluug, casaan, iwm. dahaadh, qalin lagu dahaadhay, Dahab lagu dahaadhay, iwm oo la nadiifiyo, koronto sifeynta korantada, oo liqday bilaa nikkel koronto iwm.
CNC Machining, CNC jeestay, gringding, qodista, W / C…
Tirada ugu badan waa la shaqeyn karaa
3: Mashiinka (Xarunta mashiinka CNC, lataliyaha cnc, milling, rogida, shiidi, W / C, qodista, siyoodba…)
5: Dhameynta Dusha sare
100% kormeer kahor dhoofinta muunad, baaritaanka muunad qaadashada oo ah shuruudaha macaamiisha ee wax soosaarka ballaaran.
Xirmooyinkayada caadiga ah: alaabada lagu duubo xumbo, ama 1 gabal / bac PP, ka dibna sanduuq alwaax ah ama kartoon warqad ah. Badi Badeecadaha Waxaa Diray International Airway Express, DHL, Shipping. Caadi ahaan Waxay Qaadataa Qiyaastii 7-10 Maalmood oo Shaqeyn ah (Albaab ilaa Adeeg), Waxaan sidoo kale Diyaarin karnaa Shixnad Via Sea Way.
Haddii aad heshay qayb aan u qalmin, fadlan na tus sawirrada, ka dib injineeradayada iyo waaxda QC, waxaan dooran doonnaa inaan kaa caawinno inaad dayactirto ama aad dib u cusbooneysiiso 10 ~ 15 maalmood gudahood iyadoo loo eegayo tirada la diiday.
Waxaa jira 5 Ikhtiyaar oo lagu Bixin Karo Amarka: Paypal, Western Union, T / T, Transfer Bank (Sida OCBC) Si naxariis leh u dooro Kuwa kuugu Haboon ee Aad Diyaarsato.
50% dhigaalka, iyo dheelitirka la bixiyay kahor inta aan la rarin.
1:Warshad si toos ah, oo leh tayo wanaagsan iyo qiimo macquul ah.
2: Falanqaynta: Waxaan leenahay waayo-aragnimo hodan ah oo ku shaqeynaya noocyo badan oo qaybo mashiinno ah oo leh noocyo badan oo qalab ah.
Si heer sare ah ayaa loo soo dhaweynayaa Heerka aan caadiga ahayn, heerka, OEM, qalabka wax lagu farsameeyo.
Qaybaha waxay la imaan karaan saxnaan sare, dulqaad ayaa gaari kara +0.005mm, Qiyaasta dusha sare waxay gaari kartaa Ra0.8-3.2
3: Isku soo wada duub: Waxaan leenahay waax isugeyn xirfad leh, maxaa yeelay warshaddeenu waxay kaloo sameysaa qalab, waxay kuu fidin kartaa adeeg isku duubni ah.
waxaan sidoo kale siinaa xalal hal-joogsi ah macaamiisheenna. Haddii aad wax dhibaato ah qabtid, waad nala soo xiriiri kartaa, waxaan isku dayi doonnaa sida ugu fiican inaan ku caawinno. Haddii aad hayso talo soo jeedin qaali ah, si taxaddar leh ayaan u tixgelin doonnaa tixgelinta. Mana tusin doonno Dadka kale sawirkaaga naqshadeynta sawirka, Waana Tiirsan karnaa NDA.
Haddii aad xiiseyneyso alaabtayada, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto!
Hore: CNC steel Qaybta
Xiga: Xarunta machining birta qaybo axdi qarameedka CNC
Dabeecadda shaqaalaha adeegga macmiilku waa mid daacad ah jawaabtuna waa mid waqtigeedii ku habboon oo aad u faahfaahsan, tani waxtar weyn bay u leedahay heshiiskeenna, mahadsanid.
Waxaa qoray Honorio oo ka yimid Hongkong - 2017.11.01 17:04
Waxaa qoray Octavia oo ka yimid Danish - 2018.11.06 10:04
Xarunta machining birta qaybo axdi qarameedka CNC ...
Daabacaadda Custom Sameeyay Aluminium CNC Machining ...
Sax High Custom sameeyey CNC Machining / Mashiinka ...
CNC qaybo Aluminium / aluminium qaybo dayactir / aluminu ...